जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा – धौलागिरी खबर
जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नति अन्तिम चरणमा
धौलागिरी खबर	 २०७८ मंसिर २८, मंगलवार ०७:२४ गते मा प्रकाशित 176 0
स्तरोन्नति भएको जोमसोम–कोरला सडक । तस्बिर नारायण पौडेलको फेसबुकबाट
जोमसोम । राष्ट्रिय गौरबको कालीगण्डकी कोरीडोर अन्तरगत जोमसोम– कोरला सडकको छ वटा खण्ड स्तरोन्नतिको काम सकिएको छ ।
मुस्ताङको सदरमुकाम जोमसोम देखि चिनको सिमाना कोरला नाका जोड्ने ११० किलोमिटर सडक दुई लेनको ग्राभेल बनाउन बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले बि.स. २०७३÷७४ देखि सात वटा खण्डमा ठेक्का लगाएको थियो ।
आयोजनाका प्रमुख जगत प्रजापतीले चराङ–छोसेर २५ किलोमिटर बाहेक अन्य छ वटा प्याकेजको ७५ किलोमिटर सडक बिस्तार, पर्खाल, नाली निर्माण, घुम्ति र ग्रेड सुधार गरि ग्राभेल गर्ने काम सकिएको बताउनुभयो ।
“जोमसोम–कोरला खण्डको ६ वटा प्याकेजमा सडक स्तरोन्नति सकिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो “ढिलासुस्तिले प्रभाबित भएको चराङ–छोसेर खण्डलाई गति दिन निर्माण ब्यवसायीलाई ताकेता गरिरहेका छौ ।”
जोमसोम–कोरला सडक स्तरोन्नतिका लागि रु. दुई अरब ६ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । जोमसोम–ताङ्वे १८ किलोमिटर बज्रगुरु खड्गकृष्ण जेभी, ताङ्वेदेखि चैलेसम्म ११ किलोमिटर दिवाडाफे एपेक्स जेभी, चैलेदेखि भेनासम्म ११ किलोमिटर कान्छाराम कोशी एन्ड न्यौपाने जेभी र भेनादेखि झैतेसम्म १२ किलोमिटर सडक कञ्चनजंघा लामा बिल्डर्स बिरुवा जेभीले ठेक्का लिएका थिए ।
झैते–चराङ १९ किलोमिटर कञ्चनजंघा लामा मोतीदान जेभी र छोसेर–कोरला १४ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको जिम्मा रौताहा एपेक्स जेभी कन्ट्रक्सनले लिएका थिए । तामाङ गौरी पार्वती कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का लिएको छैटौ खण्डको चराङ–छोसेर २५ किलोमिटर सडकमा तीन बर्षदेखि काम भएको छैन् ।
उक्त खण्डका लागि रु. २४ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा रु. १५ करोड मात्र खर्च भएको छ । ६५ प्रतिशत निर्माण सकिएको छ । चराङमा कुलो र ढलको काम बाँकी छ । अरू ठाउँमा कटिङ र फिनिसिङको हुन बाँकी छ ।
लामो समयदेखि सो खण्डमा निर्माण कम्पनीले बेवास्ता गर्दै आएकाले उसको नाममा जम्मा भएको रु. एक करोड ९ लाख मोबिलाइजेसन आयोजनाको खातामा फिर्ता ल्याएको प्रजापतीले बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कोभिडका कारण कम्पनीलाई यही चैत्र महिनाभित्र काम सक्न समयसिमा दिएको छ । सरकारले दिएको अवधिमा पनि निर्माण कम्पनी काममा नफर्किए ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको यस सडक खण्डको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण स्थानमा भने स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको छ । आयोजनाका अनुसार समरको भीर, झो खोला र घ्याकरको अप्ठ्यारो खण्ड निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । घ्याकरमा मापदण्डअनुसार ग्रेड मिलान गरेर बैकल्पिक सडक निर्माण भइसकेको आयोजना प्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो ।